Hambalyo Ku Socota Iskuduwaha Cusub Ee Wasarada Hawlahaa Guud Iyo Guryaynta Ee Gobolka Togdheer
(Hadhwanaagnews) Wednesday, June 13, 2018 09:26:11
Eng: Cabdixafid Ciise Faarax Calikaar W/Q. Ugaas Cumar Jamac Iidle.
Waxaan halkan hambalyo iyo bogaadin uga dirayaa iskuduwaha cusub ee wasarada Hawlaha guud ee gobolka todheer Eng:CabdiXafid Ciise Faarax Calikaar.
Anigoo ku hadlaya Afka Ugaaska dhalinyarada Gobolada Bari . Waxaan hambalyo u dirayaa iskuduwaha cusub Eng: Cabdixaafid Ciise Faarax Calikaar oo wasiirka wasarada hawlaha guud iyo guryaynta Somaliland u magacaabay Iskuduwaha Gobolka Togdheer ee Wasarada Hawlaha Guud Iyo Guryeynta .
Iskuduwaha cusub wuxuu kamid ahaa dhalinyaradii doorka wayn ku lahayd guushii Xisbiga Kulmiye in uu marlabaad dalkmadaxweyne kanoqdo oo uu hogaamiyo,Waxaa uu ahaa Xubin Firfircoon oo door fiican ku lahaa in Xisbiga Kulmiye codkii ugu badnaa ka helo degaanada gobolka tog-dheer gaar ahaan deeganada
Dhagax-dheer,Dheryaley,Sibidhley iyo Taalo-buur.
Waxaa uu kamid ahaa madaxdii Wasarada hore xilalka uga haysay isagoo ahaa agaasimaha madaxa shaqalaha wasarada hawlaha guud iyo guryeynta Somaliland,
Waa nin dhalinyaro ah oo ka mid ah Dhalinyarada Aqoonyahanka ah ee dalka Somaliland, waa shaqsi aan aaminsanahay inuu qaranka iyo masuuliyada culus ee uu wasiirku u wakiishay kasoo bixi doono.
Aniga ooMar labaad ku hadlaya afka dhalinyarada iyo aqoon-yahanka deegaanada aan sare ku xusay waxaan ku hambalyaynayaa uguna ducaynayaa in ilahay ku asturo una fudaydiyo xilka qaranka ee uu wasiirku umagacaaabay.
Waxaan u mahad-naqaynaa wasiirka wasarada hawlaha guud iyo Guryeynta Somalialnd Cabdirashiid xaaji Ducaalle(Cabdirashid Qambi). garashada uu gartay inuu u magacaabo iskuduwaha gobolka Togdheer waxaan odhankaraa wasiir waad asiibtay waxaaadna umagacawday nin ku huboon xilka Gobolka Togdheer.
Waan ku kalsoonahay in iskuduwaha cusub Eng:Cabdihafid Ciise Faarah CaliKaar uu yahay nin karti u leh Wasarada Hawlaha guud iyo Guryeynta iyo Gobolka togdheerba.
W/Q:Ugaas Cumar Jaamac Iidle
Ugaaska dhalinyarada Gobolada Bar